နေမှ ၈ ခုမြောက် အဝေးဆုံးဂြိုဟ်
19 ± 3.2% ဟီလီယမ် (He)
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် (အင်္ဂလိပ်: Neptune) သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ၈ ခုမြောက်နှင့် နေမှအဝေးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းသည် ဓာတ်ငွေ့အမြောက်အမြားနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး မြင်နိုင်ရန်ခက်ခဲသော ခါးပတ်ကွင်း ၄ ခုရှိသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင် စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးနှင့် တတိယမြောက်အလေးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာထက် ၁၇ ဆမျှပိုလေးပြီး ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ထက်အနည်းငယ်မျှ ပိုလေးသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ဂရိနတ်ဘုရား ပိုဆီဒွန် (Poseidon) ကို အကြောင်းပြု၍ မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ အာကာသဆိုင်ရာ သင်္ကေတမှာ ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၁၇ ဆပိုပြီးကာ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ နေမှ ၃ဝ.၁ AU ကွာဝေးသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် သာမန်မျက်စိနှင့် မမြင်ရပေ။ ယင်းအား ရှာဖွေလေ့လာမှုထက် သင်္ချာနည်းလမ်းအရ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် တွေ့ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသောဂြိုဟ်တစ်စင်းပင်ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဟာဘဲလ် အာကာသမှန်ပြောင်းနှင့် မြေပြင်အခြေစိုက် တယ်လီစကုပ်ကြီးများက အသေးစိတ်ကျသော လေ့လာမှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏လေထု (ဂြိုဟ်၏အပေါ်တွင်လွှင့်မျောနေသော ဓာတ်ငွေ့အလွှာ) မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ဟီလီယံဓာတ်ငွေ့တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မီသိန်းဓာတ်အနည်းငယ်မျှပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂြိုဟ်၏အရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်နေသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ အပြာရောင်မှာ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ ဆတူမျှပါရှိသော ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်၏အပြာရောင်ထက် များစွာပို၍တောက်ပသည်။ ထို့ကြောင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် အပြာရောင်တောက်ပခြင်းမှာ အခြားအကြောင်းများလည်း ရှိနိုင်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ခတ်သော လေမှာ နေအဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ အခြားဂြိုဟ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးအနေနှင့် တစ်နာရီလျှင် ၂၁၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်း (မိုင် ၁၃၀၀ နှုန်း) အထိတိုက်ခတ်သည်ဟု တိုင်းတာရရှိသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၁၇ ဆပိုမိုကြီးမားသော်လည်း ဂျူပီတာဂြိုဟ်၏ ၁၉ ပုံတစ်ပုံသာ ရှိသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်ရံလများ
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တွင် ဂြိုဟ်ရံလ ၁၄ စင်းရှိသည်။  ထရီတွန် (Triton)သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ထိုဂြိုဟ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၁၇ ရက်အကြာတွင် ဝီလီယံ ဟာရှယ်ဆိုသူမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တချိန်တုန်းကမူ ကျူးပါး ခါးပတ်ထဲမှ ဂြိုဟ်သိမ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့နိုင်ကောင်းပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ထရိုင်တွန်သည် ကမ္ဘာမြေနှင့် အနီးဆုံးအကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထရိုင်တွန်သည် နောင်နှစ်ပေါင်း ၃.၆ ဘီလီယံအကြာတွင် ကျိုးကြေပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။] ထရိုင်တွန်၏ ပတ်လမ်းမှာ အခြားသာမန်ဂြိုဟ်ရံလများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ပတ်လမ်းအတိုင်း ၂၃ ဒီဂရီတိမ်းစောင်းလျက် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား လှည့်ပတ်နေသည်။ ထရိုင်တန်သည် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရံလနှင့် ပလူတိုဂြိုဟ်သိမ်ထက်ပင် ကြီးမားပါသည်။
ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်သည် သူ၏နေပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ထူးခြားသော ရွေ့လျားမှုများကြောင့် အာကာသပညာရှင်များသည် ဂြိုဟ်အသစ်ကို ရှာဖွေစေခဲ့သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကသာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ရက်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သေးသည်။ တစ်ခါတုန်းက နတ်ပကျွန်းမှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်း "မဟာမှောင်မဲသောအစက်"ဟု လူသိတဲ့မုန်တိုင်းကို ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်က ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ တွေ့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အမှောင်စက်ကြီးအား ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မြင်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းကတည်းက အသစ်သော အစက်များကိုလည်း မြင်ခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့် အမည်းစက် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်ကိုမူ မသိရပေ။ နာဆာ၏ အနာဂတ်အာကာသယာဉ်များက နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် အကြံပေးထားသည်။
↑ Walter၊ Elizabeth (21 April 2003)။ Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2nd ed.)။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-53106-1။
↑ Munsell၊ Kirk (13 November 2007)။ Neptune overview။ Solar System Exploration။ NASA။3March 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 February 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Neptune Profile Archived 13 December 2006 at the Wayback Machine. by NASA's Solar System Exploration
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်&oldid=730423" မှ ရယူရန်
၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။